I-EFF ifuna kube nokhetho ngokushesha – LIVE Express
i-Economic Freedom Fighters (EFF) isiphonsele iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), inselelo yokuthi zizwane amandla okhethweni lukazwelonke kulandela isinqumo senkantolo yomthethosisekelo esingujuqu mayelana nombiko woMvikeli woMphakathi ngemali eyasetshenziswa ngenkathi kuqiniswa ezokuphepha emzini waMengameli oseNkandla.
uMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, wathola ukuthi uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, wahlomula kungafanele ngenkathi kuqiniswa ezokuphepha emzini wakhe oseNkandla njengoba athola ukuthi ezinye zezinto ezenziwa azihlangene nezokuphepha. Wabe esekhipha isincomo sokuthi uZuma ayikhokhe ingxenye ethize yemali eyasetshenziswa.
Kodwa-ke uZuma wathi akazi ukuthi imalini okumele ayikhokhe nokuthi ulinde ukwaziswa ukuthi imalini.
Ikomiti elaliholwa nguNgqongqoshe woMnyango wezamaPhoyisa, uNathi Nhleko, lakhipha umbiko wokuthi ayikho imali okumele ikhokhwe uMengameli.
Emva kokufakwa enkantolo kwalolu daba yi-EFF kanye ne-Democratic Alliance (DA) inkantolo inqume ukuthi izincomo zoMvikeli woMphakathi ziyimpoqo ngakho uZuma kumele ayikhokhe ngokwakhe le mali.
Le nkantolo iphinde yanquma nokuthi uZuma kanye nephalamende bawuphulile umthethosisekelo.
Manje i-EFF ithi asisekho isidingo sokuthi uZuma kanjalo nephalamende baqhubeke nokuba semandleni. “Kungani kumele siqhubeke nesikhungo esihlulekile? Leli yithuba labantu baseNingizimu Afrika lokuthi babumbane bese besusa isigebengu ehhovisi,” kusho uMalema.
“Kumele sibize ukhetho. Njengoba iphalamende selihlulekile abantu bethu. Asivumele abantu baseNingizimu Afrika bakhethe abantu abahloniphekile abazoqinisekisa umthethosisekelo. Leli phalamende asilithembi,” kuqhuba uMalema.
uMalema uthi uma iqembu elibusayo lizithembile ngelikwenzayo abavume ukuthi kuyiwe okhethweni ngokushesha.
Ukhetho olulandelayo lukazwelonke luyoze lube ngonyaka ka-2019.
Liyaqhubeka nokuqina irandi ngemuva kokhetho
BUKA: Sekwenziwe ingoma entsha ‘ngobaba kaDuduzane’ enoMalema noZuma